Kala qaybsanaan kooxeed ayaa wali dib u celinaysa dugsiyada Waqooyiga Ireland - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Kala qaybsanaantu wali waxay dib u dhigtaa dugsiyada Waqooyiga Ireland
January 14, 2022 Warar & Muuqaal 0
Waxbarashada nabadda waxay ku jirtaa manhajka NI. Manhajyada aasaasiga ah iyo kuwa ka dambeeya dugsiga hoose waxay leeyihiin waxyaabo sharci ah oo ka caawiya ardaydu inay ka fikiraan fikradahooda wadaagga ah ee iska hor imanaya bulshadooda iyagoo ku jira xaalad wax dhisaysa, oo aan iska hor imanayn.
Waxaa qoray Jem Newton
In ka badan 40 darbiyo nabadeed ayaa weli kala qaybsan degmooyinka Belfast, Derry iyo Portadown, qaar ayaa la dhisay intii lagu jiray mashaakilaadka si loo ilaaliyo dagaalka ka dhexeeya bulshooyinka Katooliga iyo Protestant-ka, kuwa kale maalmihii hore ee xabbad joojinta dabayaaqadii 1990-meeyadii si loo niyad jabiyo hurinta rabshadaha kooxeed .
Caqabadaha, ilaa 8 mitir sare, waxay yareeyaan fursadaha noocaas ah ee gardarrada caadiga ah, laakiin si isku mid ah fursadaha wadahadalka, ma aha in la xuso xiriirka maalinlaha ah ee ka dhexeeya shakhsiyaadka.
"[derbiyada nabada] waxay kordhiyeen dareenka ah in labada bulsho aysan u baahnayn inay wada hadlaan," ayuu yiri shaqaale bulsho oo ka yimid waqooyiga Belfast maalmihii hore ee xabbad joojinta. "Waa inaad xasuusataa in [pro-British] DUP aysan la hadlin [Jamhuuriyadda] Sinn Fein iyo in maskaxdu ay hoos u dhigto dadkooda."
In kasta oo erayo wanaagsan ay ku jireen heshiisyadii Jimcaha Wanaagsan ee 1998 oo dhiirigelinayay abuurista dugsiyo isku dhafan labada bulsho, in ka badan 20 sano laga joogo heshiiskii xabbad joojinta ee nabadda jilicsan u keenay Waqooyiga Ireland (NI), ugu yaraan 90% carruurtu waxay weli dhigtaan dugsiyo la kala soocay. xagga khadadka diinta, sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ee dhowaan.
Si guud marka loo hadlo, carruurta qoysaska Protestant-ka waxay dhigtaan dugsiyo ay dawladdu maamusho halka carruurta qoysaska Katooliga ay aadaan dugsiyada 'la hayo', oo ay sidoo kale taageerto maalgelinta dadweynaha.
Hase yeeshee, isla mar ahaantaana, in ka badan 70% waalidiinta NI waxay sheegeen ra'yi ururin dhowaan ay jeclaan lahaayeen inay carruurtooda u diraan waxa loogu yeero dugsiyo isku dhafan - kuwaas oo ay si siman u cunaan qaadashada labada bulsho.
Xitaa waxaa jira sharciga xubnaha gaarka ah - "kor u qaadida waxbarashada isku dhafan" - oo looga doodayo Stormont, baarlamaanka gobolka ee la kala diray. Si kastaba ha ahaatee, horumarkeeda waxa lagu saleeyay wax-ka-beddelo ay soo bandhigeen xisbiyada waaweyn ee awood qaybsiga fulinta oo aan la hubin halka uu ku dambayn doono, gaar ahaan xilliyada gu’ga ay doorashooyinku ka dhacayaan gobolka.
"Waxaa jirta khatar ah in sharciga wax laga beddelo oo aysan mudneyn in horay loo sii wado," ayuu yiri Paul Caskey, madaxa ololaha Sanduuqa Waxbarashada Isku-dhafka ah, kaas oo caawiya maalgelinta bilowga dugsiyada iyadoo ay ugu wacan tahay deeqaha ay bixiyaan hay'adaha samafalka. "Siyaasiyiintu waxay yiraahdaan waxba kama jiraan waxbarashada isku dhafan, laakiin ma qaadaan wax tallaabo ah."
Marka waaxyaha dugsiyada la xakameeyey iyo Kaatooligga-labadaba ay sii yaraanayaan, waxbarashada isku dhafan ayaa laga yaabaa in ay khatar u arkaan qaar ka mid ah bulshooyinka caqiidada.
"Xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn waxay og yihiin in dugsigu taallo wadnaha bulshada Northern Ireland," ayuu yidhi Caskey. "Dib u habeynta waxbarashadu waa arrin kale oo ay ku adag tahay xisbiyada siyaasadeed ee waaweyn inay wax ka qabtaan."
Awood-qaybsiga fulinta, oo ay hoggaamiyaan Democratic Unionists (DUP) iyo Sinn Fein, ayaa leh rikoor xun oo ku saabsan fulinta go'aamo mawduucyo badan oo muran badan, oo ka sarreeya dhammaan waxa loogu yeero arrimaha dhaxalka ah ee raadinaya caddaalad sharci ah dilalka iyo dembiyada kale. ay sameeyeen dhammaan dhinacyada ay dhibaatadu ka dhacday.
Dad ahaan, waxbarashada isku dhafan maaha mid ku habboon Waqooyiga Ireland. Waxa jira meelo ballaadhan oo galbeedka iyo xeebta waqooyi-bari ku yaal oo ay si xad dhaaf ah u deggan yihiin Catholics iyo Protestants siday u kala horreeyaan, iyo halka isku-dhafka fasalka ee si siman aanu ahayn mid wax ku ool ah. Tan iyo arrimaha kale sida dugsiyada hoose/dhexe ayaa u horseeday 15kii sano ee la soo dhaafay hoos u dhac ku yimid abuurista dugsiyo isku dhafan - ha ahaato dhismo cusub ama isbeddelka dugsiyada jira iyadoo loo eegayo baahida waalid ee caanka ah. Labadii sano ee la soo dhaafay, masiibada COVID midna ma caawin.
Isbeddelkan, iyo dadaal lagu doonayo in si hufan loogu isticmaalo agabka waxbarashada – nidaamka dugsiyeedka gobolka waxaa loo arkaa inuu yahay kan ugu khasaara badan afarta gobol ee UK, sababtoo ah ixtiraamka dheer ee loo hayo qabanqaabada barbar socota ee dugsiyada Protestant iyo Catholic - ayaa horseeday tobankii sano ee la soo dhaafay ama wax ka badan. si loo kordhiyo caannimada iskaashiga waxbarashada la wadaago taasoo u oggolaanaysa macalimiinta iyo ardayda inay wadaagaan tas-hiilaadka, agabka iyo khibradaha kala qaybsanaanta kooxaha.
Mid ka mid ah sababaha waxbarashada la wadaago lagu najaxay waa iyada oo aan khatar gelinayn aqoonsiga iyo anshaxa dugsiyada qaybaha.
"Mid ka mid ah sababaha waxbarashada la wadaago lagu guuleystey ayaa ah in aysan khatar gelin aqoonsiga iyo hab-dhaqanka dugsiyada," ayay tiri Dr Rebecca Loader oo ka tirsan Xarunta Waxbarashada Wadaagga ah ee Jaamacadda Queen ee Belfast. "La'aanteed wax badan oo hindise wadajir ah ma dhaceen."
"Marxaladda Furaha 3 [11-14 sano], mid ka mid ah xilliyada sharciga ah ee taariikhda ee ardaydu ay tahay inay bartaan waa: 'cawaaqibta muddada gaaban iyo muddada dheer ee qaybinta Ireland', ayuu yidhi Sean Pettis oo ka tirsan Golaha NI Waxbarashada isku dhafan. Tani waxay daboolaysaa inta badan arrimaha la xidhiidha sannadihii colaadaha iyo dhacdooyinkii horseeday nabadda jilicsan.
Hase yeeshee tiro yar oo ka mid ah ardayda ayaa sii wata taariikhda wixii ka dambeeya marxaladda 3. "Caqabadda jirta ayaa ah sida loo heli karo 14-jirka inay soo gabagabeeyaan waxbarashadooda taariikheed si ay runtii si fiican u fahmaan bulshadooda," ayuu tilmaamay.
Laakiin waxa loogu yeero fasallada jinsiyadda ayaa ah qaybta ugu weyn ee wax-barashada ee ka caawiya ardayda inay sameystaan ​​aragtidooda adduunka. Carruurta waxaa la baraa laga bilaabo da'da lix jir si ay u horumariyaan ixtiraamka kuwa kale oo ay u sahamiyaan isku mid ahaanshaha iyo kala duwanaanta bulshada, qaybta manhajka ee la yiraahdo Horumarka Shaqsiyeed iyo Isfahanka.
Heerka dugsiga hoose kadib, diiradda saaraya qiyamka shakhsi ahaaneed ayaa lagu soo hadal qaaday Qaybta Jinsiyadda Maxaliga iyo Caalamka, halkaas oo ardayda laga codsado inay aqoonsadaan caqabadaha iyo fursadaha ay kala duwanaanshiyaha iyo ka mid noqoshada.
Laakiin sida laga yaabo inuu qofku filan karo, fasallada jinsiyaddu way ku kala duwan yihiin tayada. "Dhamaadkii 1990-aadkii, waxaa jirtay rajo ah in waxbarashada muwaadinimo ay u soo baxdo maaddo ahaan sida xisaabta ama Ingiriisiga. Laakiin waxaa jirtay maalgashi la'aan xagga aqoonsigeeda xirfadeed iyo horumarinteeda, "ayuu yidhi Pettis.
Natiijo ahaan, waxaa jiri kara ilaa tiro macalimiin ah oo qaadanaya xiisadaha dhalashada ee dugsiyada hoose dhexe qaarkood. "Shaqo badan oo taageeraya waxbaridda muwaadinimada waxay ku dhacday NGO-yada," ayuu raaciyay.
Laakiin Caskey wuxuu aaminsan yahay in isbeddelku hadda lama huraan yahay: "Dad badan ayaan hadda ku faraxsanayn calaamadaha dhaqanka; bulshadu aad ayey isu bedbedeshaa marka loo eego siyaasiyiinta. Waxaan rumaysanahay in uu jiro isbedel seismic ah oo ku yimid dabeecadaha dadka ee kala qaybsanaanta bulshada 3-4tii sano ee la soo dhaafay. Hadda waxa jira dardar dhab ah oo doorashooyinka [sanadkan] waxa ay noqon doonaan kuwo xiiso leh.”
Fulinta NI waxa ay rajaynaysaa in ay meesha ka saarto dhammaan gidaarradeeda nabada marka la gaadho 2023. Haddii ay taasi ku dhacdo wakhtiga loo qabtay waxa laga yaabaa in ay ku xidhan tahay nooca dawladda ka soo baxaysa doorashooyinka soo socda ee May.
#iskuulyo isku dhafan
Dr. Nagasura T. Madale, oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga dhaqanka, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xoojiyo waxbarashada nabada oo laga bilaabo dhalinyarada si looga hortago, mustaqbalka fog, kororka xagjirnimada rabshadaha leh gaar ahaan aagagga dalka ee u nugul inay ku soo xadgudbaan dowladda Islaamiga ah. -xiriiriyeyaal xagjir ah. [sii wad akhriska…]
Wadaxaajoodyada u dhexeeya gobolka iyo Xoogagga Kacaanka ee Kolombiya (FARC), iyo suurtagalnimada in la saxiixo heshiis - iyo, sidaa darteed, furitaanka xilli colaadeed ka dib - ayaa in badan oo naga mid ah ka dhigay Colombia inay ku riyooto dal cusub. Si loo xaqiijiyo riyadan, rajo badan ayaa inta badan la galiyay waxbarashada. Laakiin markay tahay soo-jeedinta waddo cad oo loo maro waxbarashada xilligii colaadaha ka dib, su'aalo ka badan jawaabta ayaa soo baxa. Sidee ayey waxbarashadu gacan uga geysan kartaa wada-xaajoodka xallinta khilaafaadka iyo sidii loo gaari lahaa xasillooni iyo nabad waarta oo laga helo Kolombiya? [sii wad akhriska…]
Inta udhaxeysa Fikirka iyo Xaqiiqada: Waxbarashada Nabadeed ee Khatarta ah ee Khilaafaadka Kadib-Khilaafka
Taageerayaasha Waxbarashada Khatarta ah ee Nabadda waxay raadinayaan inay xoojiyaan shakhsiyaadka, si ay awood ugu yeeshaan codadka isla markaana ay sare ugu qaadaan kaqeybgalka iyo wakaaladda dadka la hayb sooco. Waxay dhiirrigeliyaan qaadashada aragtida qofka kale iyo u aqoonsashada sheekooyinka kale ee taariikhiga ah shuruudo muhiim ah si loo horumariyo miyir-qabka ardayda, si ay ugu suurtagasho inay sahamiyaan is-diiddooyinka ka jira aaggooda bulsho, siyaasadeed iyo dhaqaale, ayna u diyaariyaan inay ka hortagaan khilaafaadkaas oo kale. [sii wad akhriska…]